Dilbata, Guraandhalaa 14, 2016 Local time: 15:34
WASHINGTON DC— Dhukkubi Infeluweenzaa ykn Fluu jedhamu daariqa ykn infeekshinii ujummoo hafuuraa, funyaan, qoonqoo fi somba miidha. Dhibeen kun yoo hammaate hamma du’aatti geessisuu mala. Mallattoon dhukkuba infulweenzaa ykn Flu ho’a qaamaa digirii Ferenaayitii 100 ga’u, qoonqoo keessa dhukubuu, qaama namaa dhaamochiisuu, dafqisiisuu, dhukkubbii mataa, qufaa fi dadhabbii qaamaa yoo ta’u funyaanis nama ukkaamsa.
Dhukkubi influweenzaa baatii qorri itti hammaatu Fulbaanaa qabee hanga Bitootessaa gidduutti bifa weeraraan kan ka’u ta’uun beekama. Kutaa minisootaa keessa ka jiru Klinikii meeyoo kan Hospitaala meenkeetoo irraa Dr Amaanuuel Oljirraa maallummaa dhukkuba kanaa ibsaniiru. kuataa duraa gaaffii fi deebii kanaa mallattoo armaan gadii tuquun dhaggeeffadhaa.